Node စျေး - အွန်လိုင်း NODE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Node (NODE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Node (NODE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Node ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Node တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Node များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NodeNODE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00128NodeNODE သို့ ယူရိုEUR€0.00109NodeNODE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000982NodeNODE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00117NodeNODE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0116NodeNODE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0081NodeNODE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0286NodeNODE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0048NodeNODE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00172NodeNODE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00179NodeNODE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0287NodeNODE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00993NodeNODE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00697NodeNODE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0961NodeNODE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.216NodeNODE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00176NodeNODE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00194NodeNODE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.04NodeNODE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00893NodeNODE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.136NodeNODE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.52NodeNODE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.496NodeNODE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0945NodeNODE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0355
NodeNODE သို့ BitcoinBTC0.0000001 NodeNODE သို့ EthereumETH0.000003 NodeNODE သို့ LitecoinLTC0.00002 NodeNODE သို့ DigitalCashDASH0.00001 NodeNODE သို့ MoneroXMR0.00001 NodeNODE သို့ NxtNXT0.0901 NodeNODE သို့ Ethereum ClassicETC0.000185 NodeNODE သို့ DogecoinDOGE0.379 NodeNODE သို့ ZCashZEC0.00001 NodeNODE သို့ BitsharesBTS0.0493 NodeNODE သို့ DigiByteDGB0.044 NodeNODE သို့ RippleXRP0.00437 NodeNODE သို့ BitcoinDarkBTCD0.00004 NodeNODE သို့ PeerCoinPPC0.00433 NodeNODE သို့ CraigsCoinCRAIG0.579 NodeNODE သို့ BitstakeXBS0.0542 NodeNODE သို့ PayCoinXPY0.0222 NodeNODE သို့ ProsperCoinPRC0.159 NodeNODE သို့ YbCoinYBC0.0000007 NodeNODE သို့ DarkKushDANK0.407 NodeNODE သို့ GiveCoinGIVE2.75 NodeNODE သို့ KoboCoinKOBO0.285 NodeNODE သို့ DarkTokenDT0.00118 NodeNODE သို့ CETUS CoinCETI3.67